Gịnị bụ ihe kasị mma free online antivirus maka PC na-arụ ọrụ? | Akụkọ akụrụngwa
Gịnị bụ ihe kasị mma free online antivirus maka PC na-arụ ọrụ?
Paco L Gutierrez | | General, software, Windows
Nje Virus, nke na-atụ egwu onye iro nke ngwaọrụ ọ bụla nwere sistemụ arụmọrụ, mana ya na aha pụrụ iche nke Windows ọ bụ ezie na enweghị usoro ọ bụla nwere Trojan ndị a. Mgbe anyị zụrụ kọmputa anyị na-eche naanị maka ịme nchọgharị, igwu egwu, ibudata ọdịnaya ma ọ bụ ịrụ ọrụ, anyị chere na kọmputa anaghị achọ mmemme nchedo iji rụọ ọrụ nke ọma na ọ dị ka nke ahụ na mbido.
Oge na ọtụtụ nbudata mgbe e mesịrị bụ mgbe anyị nwere ike ịmalite ịchọpụta nsogbu na kọmputa, ihe nbudata niile a na-achịkwaghị achịkwa, nleta ndị ahụ na ibe niile na omume dị mfe nke iji pendrives gafere ọtụtụ kọmputa ndị ọzọ nwere ike were kọmputa gị niile klas nke obi faịlụ ike na-erikpu kọmputa gị na-eme ka ọ na-abaghị uru ọ bụla. Ma nsogbu ahụ abụghị naanị ọnwụ nke arụmọrụ, kwa anyị nwere ike ịme ka faịlụ anyị ma ọ bụ data nkeonwe anyị maka ndị ọzọ nwere ike izuru anyị ozi dị mkpa. Ka anyị hụ ndị nke kachasị mma anyị nwere ike ịchọta kpam kpam n'efu.
1 Ọ ka mma ịkwụ ụgwọ ma ọ bụ jiri nhọrọ efu?
3 AVG Free Antivirus
4 Kaspersky Antivirus Na-akwụghị ụgwọ
5 Free Antivirus Bitdefender
6 Ọrịa Panda Free
7 Kedu ihe kpatara iji nke ọ bụla n'ime ndị a karịa Windows Defender?
Ọ ka mma ịkwụ ụgwọ ma ọ bụ jiri nhọrọ efu?
Ihe niile na-agbadata na nnukwu nchekwa data, nke ụlọ ọrụ ndị dị n'azụ mmemme ndị a na-emelite mgbe niile iji mee ka egwu niile malware nwere ike ịdakwasị ndị otu anyị. N'ụzọ dị otú a, n'agbanyeghị agbanyeghị nje ọhụrụ ahụ, antivirus anyị ga-enwe ike ịnagide ya.
Mana ọzọkwa irè nke antivirus ndị a megide malware dị mkpa, ma ọ bụ mmetụta dị na arụmọrụ nke kọmputa anyị,, ebe ọ bụ na ụfọdụ n'ime mmemme ndị a nwere ike ịkụda usoro anyị ọtụtụ n'ihi nnukwu oriri nke ihe onwunwe ọ na-eme na ndabere. Anyị ga-ewere n'ime akaụntụ ala nke iji ma ọ bụ otú kensinammuo ya interface bụ.
N'echiche a a free antivirus mpi na nha anya na ya ụgwọ ugwo, ọbọ otu irè megide nje virus na nke kacha mma arụmọrụ na usability scores.
Ihe dị iche dị na nhọrọ ndị ọzọ dị elu anyị nwere ike ịchọ ụlọ ọrụ, mana maka ojiji nkeonwe anyị agaghị achọpụta ọdịiche ọ bụla belụsọ na akpa.
Anyị malitere ike na ihe a na-ewere dị ka eze nke free antivirus, ọ nweghị mgbe ọ ga-efu site na ndepụta nke antivirus kachasị mma na ahịa. Mmemme nke, dị ka ndị ọkachamara n'ọhịa si kwuo, na-enye ihe kachasị n'ihe gbasara nchekwa, na ọkwa nke ndị ọzọ a na-akwụ ụgwọ na karịa ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ. Na mgbakwunye na nke a, ọ na-enweta nsonaazụ kacha mma na usoro iji rụọ ọrụ, yabụ ọ bụ mmemme dị irè.
Ọ bụrụ na anyị agbakwunye na nke a na ọ dị mfe ijikwa, hazie ma ghọta mgbe ịdọ aka na ntị banyere iyi egwu nwere ike ịpụta na ihe a niile na-akpata mmetụta opekata mpe na arụmọrụ kọmputa anyị. Nke a ịrụ ụka adịghị ya na-eme Avast kacha mma enwere ike antivirus maka kọmputa anyị, ma ka ọ ghara ịdị mkpụmkpụ anyị ga-enyekwu nhọrọ maka na ndị ọzọ nwere ike iyi ka ọ dị mma karịa ma ọ bụ mara mma karịa.
AVG nwere nsụgharị n'efu mana mbipute akwụ ụgwọ. The free nhọrọ nwere malware analysis nile di iche iche, ezigbo oge mmelite, njikọ igbochi, downloads na kwa arụmọrụ analysis nke ndi otu anyi.
Ọ dịtụ ntakịrị karịa ụdị akwụ ụgwọ ya, mana na ọkwa nchekwa ha bụ otu, ya mere o siri ike inye ndụmọdụ ịkwụ ụgwọ ya. Leveldị nchekwa dị iche iche dịka ọtụtụ ndị ọkachamara si kwuo, na ịdị mfe nke ojiji na nhazi dị ka isi ebe nkiri na enweghị ike igbochi arụmọrụ nke akụrụngwa anyị.
Kaspersky Antivirus Na-akwụghị ụgwọ
Dị ka ndị ọzọ, anyị nwere mbipute akwụ ụgwọ na nsụgharị nweere onwe ya, na mbipute a na - akwụghị ụgwọ anyị agaghị echegbu onwe anyị maka ọghọm arụmọrụ ọ ga-ekwe omume n'ihi ị excessiveụbiga akụnụba oke, ebe ọ bụ na mmetụta ahụ adịghị njọ.
Ihe omume a na-enye anyị nchebe zuru oke megide ụdị malware niile ma nwee ngwaọrụ nchebe dị mkpa maka ozi kachasị mkpa anyị. Ọ bụ ezie na ọ bụghị nke kacha mma nke free antivirus na anyị nwere, ya ụgwọ mbipute bụ n'etiti ndị kasị mma ga-akwụ ụgwọ antivirus.
Free Antivirus Bitdefender
Otu nhọrọ magburu onwe ya maka ndị ọrụ na-achọ nyocha antivirus nke na-anaghị eme ka ihe sie ike mgbe echichi. Ọ bụ iji na-agba ọsọ kpamkpam na ndabere, ọ ga na-egosi anyị dị oké mkpa ificationsma Ọkwa bụrụ na nke ụdị ụfọdụ nke-enyo anyị enyo ọrụ. A na-eme nyocha, nchọpụta na mwepụ nke malware na akpaghị aka.
Igwe nyocha ahụ dị ọsọ ọsọ, na-achịkwa ịhazi faịlụ niile na folda dị na nkeji ole na ole mgbe mmalite.. Ọ nwere ọrụ mgbochi aghụghọ na mgbochi phishing, ọ na-egosi ha ma na-eme ka ị mata ozugbo ọ chọtara ha iji gbochie izu ohi data. Ọ bụrụ na ị na-achọ ezigbo, nsogbu na-enweghị ndabere nyocha, nhọrọ a ga-abụrịrị n'etiti ọkacha mmasị gị.
Ọrịa Panda Free
Nhọrọ mba enweghị ike ịhapụ na ndepụta a, ọ bụ ụlọ ọrụ Spanish nke nwere ike ịdabere na Bilbao na Madrid. Na mgbakwunye na nke ahụ, ọ na-enweta otu n'ime teknụzụ kachasị nyere na ngalaba ahụ.
Ọ na-ewu ewu n'ihi ịdị mfe nke ojiji, interface, na imewe pụrụ iche. Ma isi ihe kpatara ya sitere na netwọkụ nkeonwe ya (VPN). VPN na-arụ ọrụ site na iziga njikọ ịntanetị gị na sava echekwara. Niile data na-abanye ma na-ahapụ kọmputa gị dị na crypt, nke na-egbochi Trojans ịnweta ịntanetị gị. A na-atụ aro ọkwa a nke nchekwa ma ọ bụrụ na anyị na-eji netwọk ịntanetị.
Mgbe Panda's VPN network bụ n'efu, mana ejedebe na 150MB kwa ụbọchị. Yabụ na ọ ga - enyere anyị aka ịnyagharịa ma jiri ozi. Ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ bụ maka ya iji chebe anyị na nbudata, anyị ga-agarịrị ụdị akwụ ụgwọ ya.
Kedu ihe kpatara iji nke ọ bụla n'ime ndị a karịa Windows Defender?
Onye na-agbachitere Windows n'ozuzu ha bụ ezigbo ngwaahịa maka mkpa ndị bụ isi, ọ ga - achọpụta malware ma chebe anyị na ya ka mmemme ndị ọzọ na - eme. Mana ọ naghị enye nchebe megide ọtụtụ ụdị egwu ndị ọzọ dịka mgbapụta ma ọ bụ wayo.
Ọtụtụ nhọrọ efu, ọbụlagodi ụfọdụ ndị na-apụtaghị na ndepụta ahụ, dị ka Avira, ga-echebe anyị megide ihe niile Defender na-echebe anyị na ọtụtụ ndị ọzọ na-adịghị. Yabụ na ọ ka mma karịa ihe ọ bụla, n'ezie, mana anaghị m akwado ịhapụ nche anyị n'aka gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Gịnị bụ ihe kasị mma free online antivirus maka PC na-arụ ọrụ?
Xiaomi Redmi Rịba ama 9 Pro, ọtụtụ omume ọma na ntụpọ ole na ole [Nyochaa]
Chaja Rampow maka mkpa niile n'oge okpomọkụ a